အရောင်တင်ဆီပုံမှန်ထက်အရောင်အဖြစ်ရိပ်မိ၏။ ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံခြင်းသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာအလိုဆန္ဒပုံပေါ်ပါတယ်။ Matte လက်သည်းဆိုးဆေး - ကဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့အယူအဆမဟုတ်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်သည်းဒီဇိုင်းတူသောအနိုင်ရထားပါတယ် ...
လူသိများသောအမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ် Victoria's Secret သည်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုလှပပြီးမွှေးသောအရာများဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာဇိမ်ခံကားအတွင်းခံအမျိုးသမီးတွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြင် ...
တွင်းနှင့်အတူနောက်ပြီး - ဘယ်လိုလုပ်ဖို့?
အမြိုးသမီးမြား၏လက်ကိုအမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးစတိုင်အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ဖြစ်၏။ ဒါဟာဿုံတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပုံရိပ်ဖြည့်စွတ်သို့မဟုတ်လုံးဝဆီလျှော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် ...
တက်တူးထိုး "သင်္ဘောကို": လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ကိုဤပုံဖြင့်သမုတ်သော?
သငျသညျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဖော်ပြနိုင်သည်အချို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုစျေးဝယ်ကိုရွေးကောက်ပြီး, မူရင်းနှင့်သီးသန့်အမှုအရာအတွက်လက်ဖြင့်ထိုသို့ပြုမှကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်အဝတ်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖော်ပြနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးရှိရာကိုရွေးကောက်ပြီး ...
လာမယ့်ရာသီ၏လမ်းကြောင်းသစ်ပြီးသားပူစီနံများ၏အရောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းဒီဇိုင်နာများတက်ကြွစွာသူတို့ရဲ့သစ်ကို collection များကို၌ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့အစိမ်းရောင်ရှိသောအလင်းအစိမ်းရောင်တင့အသုံးပြုနေသည်။ ငါနောက်ပြီးပူစီနံကြောင့်၎င်း, တစ်ဦးအရည်ရွှမ်းအရောင်နဲ့လက်သည်းဖက်ရှင်ရိုက်နှက်ကြဘူး ...
Alien - Thierry Mugler ထံမှရေမွှေး။ ရေမွှေးဖွဲ့စည်းမှု, အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
- "Ekstraordiner တွင်" နှင့် "Sanessens" ဝိညာဉ်များ (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲ, မွှေးရေ) "အယ်လန်," နှင့်သူ၏နှစ်ခုညီ: ဒီနေ့ဂြိုလ်သားဟုခေါ်ဝေါ်သုံးထုတ်ကုန် Thierry Mugler အိမ်သူအိမ်သားစမ်းသပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကမပြောနိုင်ပါဘူး ...
တွမ် Ford ကား - မသိ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်မူရင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, ဗိသုကာနှင့်ရေမွှေးအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသူသညျမိမိအင်ပါယာ created နှင့်အမည်ပြောင် "imperturbable ရှင်ဘုရင်" ရရှိထားပြီးပါပြီ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကသာဖြစ်ပါသည် ...
အရေပြားသို့မဟုတ် LPG-နှိပ်ခံခြင်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ် 30 ငါးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမတော်တဆမှုခဲ့ရပြီးခံယူရတယ်ပြီးနောက် LPG-ယူနစ်ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပြီးပါပြီ ...
Long က fluffy မျက်တောင်အမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုဖော်ပြခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကိုကြည့်ပါစေ။ သဘာဝအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအပိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းမဟုတ်သောသူတို့၏, ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအများအပြား Salon ကကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ် ...
သံလိုက်အိမ်မြှောင် - ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တက်တူး
သံလိုက်အိမ်မြှောင်လမ်းအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အများအပြား avid ခရီးသွားများအတွက်သူ၏ရုပ်တုနှင့်အတူရောင်စုံတက်တူးနှင့်အတူသူတို့၏အလောင်းများကိုဆင်ယင်ခြယ်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သံလိုက်အိမ်မြှောင် - ထို Romantic စိတ်သူစိမ်းမသာသောတစ်ဦးတက်တူးထိုး, ဒါပေမယ့် ...
ဆံပင်ဆိုးဆေး "Rowan": အရောင် palette, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆံပင်ဆိုးဆေး "Rowan" ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်၏သုံးဆယ်ခန့်မိန်းကလေးများဖြစ်သောတစ်ဦး palette, ရေပန်းစားသည်။ အကြောင်းပြချက်၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ အနံ့ "Rowan" ကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြိုးသမီးမြား, ကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ကြောင်းသတိပြုပါ, မ ...
ခဲကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်အတူအပြည့်အဝကျေနပ်မှုအနည်းဆုံးမိန်းမပျိုတည်ရှိနေသေးသည်။ အမြဲတမ်းတစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်၏။ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးအများစုကလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွအေနေအောက်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ကြောင်း, သူတို့ရဲ့အသားအရေနှင့်အတူမကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ...
ပိုများသောမကြာသေးမီကတစ်နောက်ပြီးထိပ်တန်း Salon နှင့်တစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုသာဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆန်ဆောင်မှုစျေးကွက်ကြီးထွားလာသည်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ လက်သည်း-စက်မှုလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသို့သော်အချိုးပင်ရသောအခါ ...
"Faberlic"၊ အထွေထွေ "Double agent" ဖုံးကွယ်ထားသည့်သုံးသပ်ချက်များ။ မိတ်ကပ်လျှို့ဝှက်ချက်များ
Foundation မှ - ဤကမဆိုလုပ်-up, မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မပါဘဲအမျိုးသမီးအလှကုန်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ, တစျဦးဖွစျသညျ: ပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန်။ ပင်ပန်းအသားအရေမစုံလင်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်တတ်နိုင်သောဤအဖုံးအုပ်အေးဂျင့်, ...
ဒီအမွှေးနံ့သာအမျိုးအစားကဘာလဲ။ အနံ့ကဘာပါလဲ Vetiver သည် 50 နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်သည့်နှစ်စဉ်နှစ်ရှည်မြန်သောကြီးထွားလာသောသီးနှံပင်များ၏မြက်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်သာအစားအစာဖြည့်စွက်အတွက်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအများကြီးအရှေ့နိုင်ငံတွေအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသူတို့ကိုဆက်ဆံပါ။ အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့ဝတ်ပြုရေးတွင်နေထိုင်ပြီးထိုအယုံကြည်သူတွေကို "ဘုရားလက်ဆောင်များ။ " ...
ခြော, ထိုပေါက်ကွဲသံကြီးဆိုဆံပင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောလေသံဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ပုံရိပ်ကွဲပြားချင်တယ်။ ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူးဒီတော့ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအဆင်မပြေမှုဖြစ်စေမ, အဆုံး၌, နေ့တိုင်းအသွင်အပြင်ကိုလုယူကြဘူး ... , တစ်ဦးပေါက်ကွဲသံကြီးကြီးထွားဖို့
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း, ရော်နယ်ဒို, Lionel Messi နဲ့တခြားကစားသမားကျွန်တော်တို့ကိုမသာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဂိမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောခေါင်းဖီးကိုအောကျမေ့နေကြတယ်။ အားကစားစွမ်းရည်အပြင်, သူတို့အရသာများစွာသောအသိနှင့်ပြည့်စုံနေကြသည်။ အကြောင်း ...
လှပခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့နောက်ပြီး - လူအတော်များများမိန်းကလေးများရဲ့အိပ်မက်။ ထိုသို့ပန်းချီဖို့ဘယ်လို, လိမ်းဆေးလက်သည်းများနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းမြဲဂျယ်အရောင်တင်ဆီ၏ထွန်းနှင့်အတူတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောမယ့် ...
သွေး (အမည်း) - အရှိဆုံးအထိခိုက်မခံပြဿနာများကိုတစ်ဦး, အထူးသဖြင့်သူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေမကွယ်နိုင်မည့်ကိစ္စရပ်များတွင်။ ပျော့အလွန်အထိခိုက်မခံပိတ်ထည်၏ဒဏ်ရာပြီးနောက်သို့မဟုတ် ... : တစ်သွေးပေါ်ပေါက်ရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
50 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,560 စက္ကန့်ကျော် Generate ။